क्लिन फिडबारे जान्नैपर्ने केही कुरा - Tech News Nepal Tech News Nepal
शनिबार, कार्तिक ८, २०७७ १०:५४
काठमाडाैं । आज शनिबारदेखि नेपालमा क्लिन फिड व्यवस्था लागू भएको छ । वर्षौदेखि चर्चामा रहेको भए पनि धेरैलाई यसबारे द्धिविधा भएको हुन सक्छ ।
के हो क्लिन फिड व्यवस्था ?
क्लिन फिड भनेको टेलिभिजनमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । अब नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनले आफ्नो कार्यक्रममा विज्ञापन बजाउन पाउने छैनन् ।
त्यस्ता टेलिभिजनले आफूले उत्पादन गरेको सामग्री प्रसारण गर्न पाउने भए पनि विज्ञापन भने पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशी च्यानलले विज्ञापन बजाउन नपाउने भए पनि नेपालमा प्रसारण अनुमति लिएका कम्पनीमार्फत स्थानीय स्तरमै विज्ञापन भने हाल्न पाइनेछ ।
क्लिन फिडसम्बन्धी कानून
गत वर्ष जारी भएको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मा क्लिन फिड सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा ऐन जारी भएको १ वर्षभित्र नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरुले एक वर्षभित्र विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
विदेशी च्यानलले विज्ञापन बजाए के हुन्छ ?
आज शनिबारदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलले विज्ञापन बजाएमा ५ लाख जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो जरिवाना विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारण गर्ने अनुमति लिएका संस्थालाई हुनेछ ।
विज्ञापन बजाएको नबजाएको अनुगमन कसले गर्छ ?
आजदेखि कुनै विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाएमा उपभोक्ता आफैंले पनि उजुरी गर्न सक्छन् । यसको अनुगमन गर्नको लागि सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको छ ।
यो बोर्डले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाएका छन् कि छैनन् भनेर नियमित अनुगमन गर्छन् ।
क्लिन फिडको प्रभाव कस्तो होला ?
नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाउन नपाउने भएपछि उनीहरुले विज्ञापन बिनाको टेलिभिजन सामग्री पठाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा विदेशी च्यानलको प्रसारण लिएका निकायहरुले त्यसलाई रिसिभ गर्न छुट्टै उपकरणहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशी च्यानललाई नेपालमा प्रसारण गर्ने अधिकार लिएका धेरै कम्पनीहरुले त्यस्तो तयारी नगरेका कारण आजदेखि धेरै टेलिभिजनहरु नेपालमा प्रसारण हुने छैनन् ।
क्लिन फिडका कारण आईपीएल, प्रिमियर लिग र च्याम्पियन्स लिग हेर्न नपाइने